“सेक्स”का कारण ज्यान गुमाएकी रुसी महारानी केथरिन ! – BRTNepal
बिआरटीनेपाल २०७६ असार १४ गते ७:३४ मा प्रकाशित
सेक्सका कारण मृत्यु त्यो पनि एक प्रशिद्ध महारानीको ! त्यसो त रुसकी महारानी केथरिन दि ग्रेट द्धितिय सेक्सको लागि भोकी महारानीको रुपमा चिनिन्छन् । जस्लाई सन् १७२९ देखि १७९६ सम्म सेक्सको भोकी रहेकी माहारानीको रुपमा पनि चित्रण गरिने गरेको पाईन्छ । उनले आफ्नो यौन प्यास मेटाउन कुनै दोस्रो सहपाटीको साथमा नभएर आफ्नै राजशी शान–मानको लागि पालेको घोडासंगको शारिरिक सम्पर्कले ज्यान गुमाएकी थिईन । स्रोतका अनुसार उनी आफ्ना श्रीमानसंगको यौन असुन्तुष्टिका कारण आफ्नो पतिसँग टाढिएर बस्न थालेकी थिइन् ।